Puntland oo ka hadashay R/wasaaraha Cusub ee Dawlada Soomaliya (Akhriso) - Hablaha Media Network
Puntland oo ka hadashay R/wasaaraha Cusub ee Dawlada Soomaliya (Akhriso)
HMN:- Maamulka Puntland ayaa ka hadlay Raysalwasaaraha Cusub ee SOomaaliya Warsaxaafadeed Kasoo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa u Qornaa Sidan.
“Puntland waxay si weyn ugu hambalyeynaysaa Raiisalwasaaraha cusub ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta loo magacaabay xilka Raiisalwasaaraha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Dawladda Puntland waxay u aragtaa Mudane Xasan Cali Khayre in uu kasoo bixi karo mas’uuliyadda loo igmaday,isagoo horay usoo qabtay arrimo badan oo xaga Bini’aadantinimada ah oo maanta Soomaaliya ay baahi badan u qabto.
Dawladda Puntland waxay la shaqeyn doontaa isla markaana ay gacan siin doontaa Raiisalwasàraha jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre,waxayna ka rajaynaysaa ummada Soomaaliyeed in si dhow loola shaqeeyo.
Ugu danbeyn Dawladda Puntland waxay u rajaynaysaa Raiisalwasaaraha cusub Mudane Xasan Cali Khayre in Eebe ku asturo xilkaas loo igmaday isla markaana uu dhaafiyo Soomaaliya marxalada adag ee ay ku jirto. soona dhiso Xukuumad rayo leh. “
HALKAN HOOSE KA DAAWO QAABKII AY U DHACDAY MAGACAASIBTA R/WASAARAHA